सरकार–विप्लव सहमति: दुवैको शक्ति क्षयीकरणको परिणाम सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएको सहमति निरन्तर कायम रहला कि नरहला? यो सहमति ओली सरकारको स्वार्थ र विप्लवको बाध्यताको परिणाम भए... सोमबार, फागुन २४, २०७७
मानवता हराएको समयमा कसरी मनाऔं महिला दिवस? एकचोटी आत्मादेखि मनन गरौं, आफ्नो छोरीचेली सम्झौं त! अझै कहिलेसम्म सहेर बस्ने? कहिलेसम्म पुरुषको दुष्कर्मको दोषी नारीलाई बनाउने? कहिल... सोमबार, फागुन २४, २०७७